China Gold Kacha Centrifugal Concentrator Collector Machine ifektri kanye nabaphakeli | Khuphuka
Umshini Wokuqoqa Igolide we-Gold Kacha Centrifugal
IGold kacha, ebizwa nangokuthi i-gold centrifugal concentrator yinto elula futhi ethandwayo yokuqoqa ingxube yegolide. Isetshenziswa kakhulu e-Afrika kanye nasemazweni aseNingizimu Melika, lapho kunezimboni eziningi zegolide ezincane. Igolide leKacha concentrator iyithuluzi elifanele labavukuzi abancane begolide ngezindleko zalo eziphansi, ukusebenza okulula nezinga eliphakeme lokutakula igolide.
Igolide le-kacha concentrator linokusetshenziswa okucishe kube banzi kuzo zonke izinhlobo zesitshalo se-gravity solution yegolide. Ingasetshenziselwa isihlabathi segolide se-placer alluvial, iphinde isetshenziswe kwinqubo yokugaya yegolide ye-quartz vein. Ungafaka isihlabathi somfula esitsheni segolide ku-kacha yegolide bese uthola ukugxila kwesihlabathi esimnyama segolide. Futhi ungaxhuma isigayo segolide esimanzi ne-kacha yegolide, futhi igolide kacha ingaqoqa igolide kusilayidi esikhiqizwa isigayo samanzi sepani.
Isimiso esisebenzayo segolide kacha sicishe sifane ne-knelson concentrator. Impahla eluhlaza namanzi ngaphakathi kwe-liner yesitsha kwakuxubekile kwaba yi-slurry, ubukhulu be-slurry kufanele bube ngaphansi kuka-30%. Lapho-ke lapho ujikelezo wesitsha ujikeleza, izinhlayiya ezisindayo zegolide noma isihlabathi esimnyama sifafazwa ngaphakathi kwemisele ye-liner yesitsha ngenxa yamandla eccentric, ngenkathi isihlabathi esikhanyayo noma inhlabathi sikhishwa emlonyeni wokukhipha. Ngemuva kwemizuzu engama-40 noma ihora elilodwa, i-kacha yegolide kufanele icishwe, futhi isisebenzi sisebenzise isifutho samanzi ukugeza ukugxilisa kwegolide emihosheni. Ekugcineni i-concentrate yegolide namanzi kuyakhishwa emigodini emincane engezansi komugqa wesitsha.
Amandla / kw
Umthamo (t / h)
Usayizi wokuphakela omkhulu / mm
Kudingeka amanzi (m³ / h)
Ubukhulu be-Max Slurry
Gxilisa isisindo ngeqoqo ngalinye / KG
Isikhathi sokuqalisa ngeqoqo ngalinye / ngehora
Isixazululo sokucubungula esiphelele, esilula futhi esinamandla = ukutakula okuphezulu kokubili okusansimbi futhi okuyigugu okusansimbi, ikakhulukazi ukutholwa kwegolide okuhle, kusuka ekuthungeni imfucumfucu, imibhede yemfucumfucu nesihlabathi esine-alluvial.
I-2.Iyenzelwe ezindaweni ezikude nezindawo ezimbi, isebenzisa i-generator nenketho yelanga etholakalayo.
Awekho amanzi ahlanzekile adingekayo, afanele zonke izinhlobo zezwe nezimo zemvelo, ekahle ekufuneni igolide.
Ama-multiples angasetshenziswa njengendawo yokwelashwa ngokwezifiso, lapho umnikazi angawaqasha khona futhi anike amandla abanye ukucubungula okwabo ngendlela ephephile futhi elula. Ukubeka izidleke amayunithi amaningana kusho nokuthi opharetha oyedwa angaphatha ithani elikhulu lezinto zakhe.
Langaphambilini 10-20 Ton Per Hourcopper Gold Ore Flotation Machine
Olandelayo: Ibhola elincane leGolide leMercury Amalgamator
Igolide Ore Ball Mill Ukugaya Kuvunguza ukwahlukaniswa M ...
Igolide Gravity Knelson Centrifugal Concentrator S ...
Igolide Gravity Shaking Ithebula Isihlukanisi Machine
Imayini ye-Ore Mixer Tank Machine
Ibhola elincane leGolide leMercury Amalgamator
10-20 Ton Per Hourcopper Gold Ore Flotation Mac ...